Yini i-kombucha? Izinzuzo zesiphuzo esithandwayo | Bezzia
Yini i-kombucha? Izinzuzo zesiphuzo esithandwayo
UToñy Torres | 11/10/2021 16:00 | Ukudla okunomsoco
Yize bekuyisiphuzo semfashini isikhathi esithile, i-kombucha inamakhulu eminyaka yomlando ngaphansi kwebhande layo. Lesi siphuzo esenziwe ngoshukela, amabhaktheriya netiye, inomsuka wayo eChina ngenxa yezakhiwo zayo eziningi ezizuzisayo, waziwa kulelo siko njengeDivine Tsche. Isiphuzo esinabalandeli abaningi ngokwengeziwe phakathi kwabathengi baso futhi hhayi ngeze, sesibe umkhiqizo wezinkanyezi walabo abamele ukudla okungokwemvelo kakhulu.
Kombucha etholwe ngokubila itiye, imvamisa itiye eliluhlaza noma elimnyama, kanye noshukela kanye nesiko elithile lemvubelo namagciwane. Le nqubo yehlukaniswe yaba ukuvutshelwa okubili, ngesikhathi sokuqala, ama-microorganism agcina enoshukela omningi kanye namagciwane. Ngesikhathi sokuvutshelwa kwesibili, kunezelwa izithelo, okuyizo ezigcina zinambitha isiphuzo.
1 Izinzuzo zekombucha
1.1 Ingabe wonke umuntu?
Namuhla kunezinhlobonhlobo zama-kombucha futhi angathengwa ngokukhululeka okukhulu. Phakathi kwabashukumisi, abadali bokuqukethwe nabalandeli bezinkundla zokuxhumana, i-kombucha isize ukuzokhipha ezinye izinhlobo zeziphuzo ezibandayo. Okuthile ngokungangabazeki kunempilo enhle kakhulu ngokungafani nezinye iziphuzo, lokhu okuvutshiwe nakho kunenzuzo enkulu empilweni. Ngabe ufuna ukwazi konke okungenziwa yi-kombucha ngempilo yakho?
Izici ezinikezwe lesi siphuzo seminyaka eyizinkulungwane azipheli, phakathi kwabo, okulandelayo:
Kuthuthukisa ukugaya: IKombucha isiphuzo sokugaya ukudla kakhulu, ngenxa yamagciwane amancane asiza ukuqinisa i-macrobiota yamathumbu.
Yehlisa umfutho wegazi.
Ithuthukisa amazinga e-cholesterol egazini
Siza qinisa amasosha omzimba.
Ilawula ukuhamba kwamathumbu futhi sisebenza kakhulu ekwelapheni izinkinga zesisu njengokuqunjelwa.
Ukuthuthuka ukungakhululeki kwe-premenstrual syndrome.
Isiza ukuthuthukisa impilo yesikhumba, izinzipho nezinwele.
Siza detoxify organism ngoba siyisiphuzo esihlanzayo futhi esinama-antioxidant.
Ithuthukisa ukusebenza kwezinso.
Ingabe wonke umuntu?
Yize kungumkhiqizo wokuqala onempilo, kuyaphikiswa ezimweni ezahlukahlukene. Ngokwesibonelo, abantu abanezinkinga zezinso akufanele badle lesi siphuzo. IKombucha nayo ayizifanele izingane, abesifazane abakhulelwe noma abesifazane esikhathini se- ukuncelisa, noma kulabo abanamasosha omzimba acindezelekile. Uma uphakathi kwala maqembu, kungcono ukuthi ungathathi i-kombucha nokuthi ubonane nodokotela wakho ukuthi hlobo luni lwemikhiqizo ongaludla ngaphandle kwengozi.
Okokuqala, kufanele kukhunjulwe ukuthi ngumkhiqizo owenziwe ngokuvutshelwa, okubandakanya ingxube yemvubelo, amabhaktheriya noshukela. Lokho kusho ukuthi, iqukethe inani elincane lotshwala Njenganoma isiphi esinye isiphuzo esibilisiwe, noma ngabe siyisilinganiso esincane, kufanele sinakwe ezimweni ezithile. Ngakolunye uhlangothi, i-kombucha ayinamathiseli futhi lokho kungenye yezizathu zokuthi idangele kwabesifazane abakhulelwe, ngoba umbungu ungalimala.
Kuwo wonke lawo macala lapho lesi siphuzo seminyaka eyinkulungwane, yize sisha kithina, singaphikiswa, lokho ochwepheshe abakuncomayo ukuqala kancane. Ungalindeli ukuthola ukunambitheka okuhle kakhulu kusuka kusiphu sokuqalaNgokuphambene nalokho, kushiya ukuzwa okune-asidi. Kodwa-ke, kulula ukuthola ukunambitheka kwayo, ngoba kuyabhibhidla futhi kuyaqabula kakhulu, okwenza kube indawo enkulu yezinye iziphuzo ezibandayo ngisho nobhiya.
Uma uthatha isinqumo sokuzama kombucha, kufanele wazi ukuthi ongoti batusa ukungaphuzi ingilazi engaphezu kweyodwa ngosuku. Lokhu kungenxa yokuthi isiphuzo siqukethe ushukela futhi singabuyela emuva ezimeni eziningi. Futhi, ungakhohlwa ukuthi iqukethe inani elincane lotshwala, okungathi ngobuningi balo kube yinkinga. Thola lesi siphuzo esize ukuguqula umhlaba wokudla futhi ujabulele izindawo zayo eziningi nezinzuzo zezempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ukudla okunomsoco » Yini i-kombucha? Izinzuzo zesiphuzo esithandwayo
I-manicure yaseFrance ekhaya ngezipikili ezimfushane